अमेरिकाभन्दा झण्डै बीस गुणा धेरै नेपालमा भीआईपी संख्या - Jhilko
अमेरिकाभन्दा झण्डै बीस गुणा धेरै नेपालमा भीआईपी संख्या
नेपालमा भीआईपी बन्न पैसा धेरै भए, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुगे रातारात सम्भव छ । कुनै शक्तिशाली नेतालाई प्रभावमा पार्ने हो भने उसलाई आशिर्वाद प्राप्त हुन्छ र भीआईपीको पगरी गुथिहाल्न पाउँछ । भीआईपी अर्थात् भेरी इम्पोर्टेण्ट पर्सन (अति विशिष्ट व्यक्ति) नेपाल जस्तो सानो र गरीव देशमा यति धेरै छन् कि विकसित र धेरैजसो ठूला देशका जनताले सुन्दा र पढ्दा ब्यंग्य गर्छन ।
जुन दिन मान्छे भीआईपीको पगरी गुत्छ त्यस दिनदेखि उसले देशको ऐन, नियम, कानुनको मर्यादाभन्दा माथि आफूलाई राख्छ । आमजनताभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने नयाँ वर्ग बन्छ । राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो तर भीआईपी बन्ने र बनाउनेको प्रवृत्ति उही रह्यो । संस्कार यथावत नै रह्यो ।
एयरपोर्टदेखि सडक जताजतै भीआईपीको शान बेग्लै छ । देशको सुरक्षाभन्दा भीआईपीले आफ्नो सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन । अत्यावश्यकताले भन्दा बढी आडम्वरका लागि सुरक्षा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसमाथि भीभीआईपी नै बनेको छ भने त त्यसको चाल ढाल नै अर्कै ! ईश्वरले धर्तिमा शासन गर्न खटाएका देवदूत वा राजा, महाराजा नै सम्झिन्छन उनीहरुले आफूलाई । गणतन्त्र भए पनि आफूलाई विगतकै राजा, महाराजाकै रवाफमा बाँच्छन । सभ्य र चेतनशील मान्छेले उसलाई भित्रभित्र गिज्याइरहेका हुन्छन, नजिक देखिन लाज मानिरहेका हुन्छन तर ऊ सुरक्षाकर्मी र आफ्ना आसेपासेको घेरामा बसेर आफूलाई विशेष दर्जाको मान्छे ठानेर धाक रवाफमा चल्छ ।
नेपाल जस्तो सानो र गरिब देशमा भीआईपीको संख्या नै चार हजार आठ सय ६० छ । तीन करोड जनसंख्या भएको र गरीव देश नेपालभन्दा धेरै गुणा ठूलो र विश्वकै सम्पन्न देश अमेरिकामा दुई सय ५२ भीआईपी छन् । जबकि यो देशमा ३३ करोड जनसंख्या छ । पौने सात करोड जनसंख्या रहेको सम्पन्न देश बेलायतमा ८४, छ करोड ५० लाख जति जनसंख्या भएको फ्रान्समा एक सय नौ, १२ करोड ६५ लाख जति जनसंख्या भएको जापानमा एक सय २५, १४ करोड ६० लाख जनसंख्या भएको रसियामा तीन सय १२, आठ करोड ३७ लाख जति जनसंख्या भएको जर्मनीमा एक सय ४२, दुई करोड ५४ लाख जनसंख्या भएको अष्टेलियामा दुई सय पाँच, एक अर्ब ४३ करोड जनसंख्या भएको चीनमा चार सय ३५, पाँच करोड १२ लाख चानचुन जनसंख्या भएको दक्षिण कोरियामा दुई सय ८२ जना छन् ।
विकसित देशसँग आर्थिक हिसावले नेपालको तुलना
अमेरिकाको जीडीपी दुई सय १४ दशमलव तीन खर्ब अमेरिकी डलर छ र जीडीपी प्रतिव्यक्ति अमेरिकाको ६५ हजार एक सय १२ डलर छ भने नेपालको २९ दशमलब आठ अर्ब जीडीपी र प्रतिव्यक्ति जीडीपी एक हजार ४८ डलरमात्र छ ।
चीनको जीडीपी एक सय ४१ दशमलव चार खर्ब र जीडीपी प्रतिव्यक्ति १० हजार ९९ अमेरिकी डलर छ । जापानको जीडीपी ५१ दशमलव पाँच खर्ब र जीडीपी प्रतिव्यक्ति ४० हजार आठ सय ४७ छ । जर्मनीको जीडीपी ३४ दशमलव चार खर्ब र जीडीपी प्रतिव्यक्ति ४६ हजार दुई सय ८१ छ । फ्रान्सको जीडीपी २७ खर्ब र जीडीपी प्रतिव्यक्ति ४१ हजार सात सय ६१ छ । रसियाको जीडीपी १६ दशमलव छ खर्ब र जीडीपी प्रतिव्यक्ति ११ हजार एक सय ६२ छ ।
भारतकै बाटोमा नेपाल
नेपालका शासकले धेरै नकारात्मक कुरा भारतका शासकबाट नै सिकेका छन् । भारतमा पाँच लाख ७९ हजार ९२ जना भीआईपी छन् । यो धेरै नै ठूलो संख्या अनि व्यंग्य हो ।
विभिन्न क्षेत्रमा विशिस्ट योगदान दिएकाहरुलाई भीआईपीको पदवी भारतले दिने गरेको छ ।
भीआईपी बने, बनाइएपछि आर्थिक, सुरक्षामा धेरै ठूलो असर पार्छ ।
पाकिस्तानमा इमरान खान शासनमा आएपछि आमजनतालाई असर पारेको भन्दै एयरपोर्टमा भीआईपी प्रोटोकलमा प्रतिबन्ध नै लगाए । यसले सकारात्मक सन्देश दियो ।
नेपालमा पनि भीआईपीको मानक बदलेर एकदमै थोरै संख्या निर्धारण गर्ने हो कि ?
(विभिन्न अनलाइन स्रोतबाट लिइएकाले कतिपय तथ्यांक गलत पनि हुनसक्छ । यसमा नेपालमा भीआईपी प्रवृत्तिको बारेमा तुलनात्मक अध्ययनको प्रयास हो यो)
थप ३५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ८ सय २५ पुग्यो
११४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
नेपाल र भुटान गलत उच्चारण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति भेनेजुएला...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएला उच्चारण गर्न कठिनाइ भएको भिडियो सामाजिक...
MCC is made out to be sponsored and blown up: Foreign Affairs...
He commented thatauseless and unfruitful debate was being carried out regarding...
पुणेमा पर्खाल भत्किँदा १५ व्यक्तिको मृत्यु
निमार्णाधिन काममा सलग्न रहेका कामदार सुतिरहेको स्थानमा यो पर्खाल भत्किाँदा १५ व्यक्तिको...
ह्याक गरेर एटिएमबाट पैसा निकाल्ने पाँच चिनियाँ पक्राउ
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मध्यरातमा दरबारमार्गस्थित नवील बैंकको एटिएमबाट...